अर्थ/वाणिज्य Archives - Page3of4- Himali Patrika
४ असार २०७७, 6:41 am
काठमाडौं । नेपालमा ४ लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यो तथ्यांक यात्रुवहाक र मालवहाक दुबैको हो । यी सवारी साधनमा ६० प्रतिशत स्वरोजगार छन् । यातायात विभागमा दर्ता भएको यस्ता सवारी साधनमा बैंकहरूको ८०…
सरकारलाई खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
३२ जेष्ठ २०७७, 9:08 am
काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारलाई खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयककाे विषयमा सांसदहरुले उठाएकाे प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले चालु खर्च धान्न सरकारलाई समस्या रहेको बताउनुभएको हो…
विद्युत् बचत गर्ने नाममा महँगा विद्युतीय गाडीलाई कर छुट दिइन्न…
२० जेष्ठ २०७७, 3:28 pm
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारण जनताले न्यून मूल्यका गाडीबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले विद्युत् बचत गर्ने नाममा महँगो विद्युतीय गाडी किनेर रकम विदेशिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८…
अर्थमन्त्रीको खुलासा : नेपालमा एमसीसी कार्यक्रम तीन वर्षदेखि सञ्चलन हुँदै…
१९ जेष्ठ २०७७, 7:08 am
काठमाडौं । एमसीसीको सहयोगमा गएको तीन वर्षदेखि नै सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको खुलासा भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सो कुराको खुलासा गरेका हुन् ।…
१७ जेष्ठ २०७७, 1:16 pm
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भारत सरहको मूल्य बनाउनका लागि डिजेल र पेट्रोलमा कर बढाइएको जानकारी दिएका छन्। खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक ऐन मार्फत् डिजेल पेट्रोलमाथि कर लगाएको प्रष्टिकरण दिएका छन्। उनले…
अमेरिकी फौजी किराभन्दा हजारौं गुणा खतरनाक सलह किरा, नेपालमा रोक्न…
१४ जेष्ठ २०७७, 5:40 am
चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरु हुनभन्दा केही हप्ता अगाडि अफ्रिकी महादेशका केही देशहरु जस्तै– केन्या, सोमालिया, तान्जानिया, युगाण्डा, दक्षिणी सुडान, इथियोपियामा खाद्यान्न बालीमा एक प्रकारको फट्यांग्रा (जसलाई नेपालीमा सलह भनिन्छ)ले धेरै नै क्षति पुर्‍याएको समाचारहरु…
अमेरिकी डलरका लागि खतराको घण्टी, चीनले ल्याउँदैछ यस्तो शक्तिशाली डिजिटल…
१३ जेष्ठ २०७७, 2:38 pm
चीनले सन् २०२२ मा एक डिजिटल युआन मुद्रा ल्याउन चाहन्छ, जसको नाम हो इ–आरएमबी । सन् २०२२ मा चीन जाने मानिसहरुले यहीँ नयाँ डिजिटल मुद्रामा किनमेल वा लेनदेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो यस्तो मुद्रा हुनेछ…
कोरोना संकट : चीन छाड्दै १ हजार विदेश कम्पनी, भारतमा…
९ बैशाख २०७७, 7:53 am
काठमाण्डौ । आउँदा दिनमा चीनको ‘म्यान्युुफ्याक्चरिङ हब’ ताज खोसिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उत्पन्न खराब परिस्थितिका बीच हाल चीनमा रहेका लगभग १ हजार विदेशी कम्पनीहरु ती देशका सरकारका अधिकारीहरुले भारतमा आफ्नो उद्योग…
इटालीमा कोरोनाभाइरसको उपचार गर्न रुसले पठायो सैन्य टोली
९ चैत्र २०७६, 2:21 pm
मस्को : इटालीमा कोरोना भाइरसको महामारी डरलाग्दो रुपमा फैलिरहँदा मेडिकल सहयोगका लागि रुसले आफ्ना सेना पठाउने भएको छ । यही आइतबार रुसले सैन्य मेडिकल टोली इटाली पठाउने तयारी गरेको हो । भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि नै…
कोरोनाभाइरसका कारण नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर, एक डलर बराबर १…
७ चैत्र २०७६, 5:44 am
७ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्चविन्दुमा पुगेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँ २८ पैसा बिक्रीदर तोकेको छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो…